ထီးပြင်၊ ထီးရောင်းကာ ဝမ်းရေးကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြေရှင်းနေတဲ့ အဘိုးကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက် - Cele Gabar
ထီးပြင်၊ ထီးရောင်းကာ ဝမ်းရေးကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြေရှင်းနေတဲ့ အဘိုးကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက်
By ChilliPosted on April 6, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးစက်ကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဝမ်းရေးကို ခက်ခဲစွာဖြေရှင်းနေတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ အဘိုးရှိတဲ့နေရာကို မိုးစက်ကသွားရောက်ခဲ့ပြီး အဘိုးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတာကြောင့် ကူညီထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်း အခုလိုပဲမျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။
““အဘ ထီးပြင်တာလား…??” “ဟမ်…” “ထီးပြင်တာလား ထီးရောင်းတာလားလို့…” “ကျွန်တော်နားသိပ်မကြားရဘူးဗျ …” “ထီးရော ရောင်းလားလို့…” (အနားကပ်ပြီး မေးလိုက်ခါမှ..) “ရောင်းပါတယ် ၂၀၀၀ ပါ …” “ဟုတ်ကဲ့ …” ဒီလိုနဲ့ အဘကို အနားနားကပ်ပြီး သေချာမေးကြည့်တဲ့ မေးခွန်းတွေအရ… သားသမီး (၄)ယောက်နဲ့ အိမ်ငှါးနေကာ ဘဝကို ခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းနေကာ ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း သိရ၍… “အဘ ၂၀၀၀ နော် … ရော့ တစ်သိန်းယူသွားနော်..” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…’” အဘရဲ့ နားမကြားတဲ့ ဝေဒနာအပြင် အိမ်ကပ်ထဲက အကြွေလေးတွေနဲ့ ဒီနေ့ အတွက် ထီးပြင်နဲ့ ထီးရောင်း တွက်ချေမကိုက်သေးကြောင်း မြင်တွေ့ရတာဟာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ ။
အဘရဲ့ ခက်ခဲနေတဲ့ ဘဝအခြေအနေတွေ အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း … ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများ ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ။”ဆိုပြီးဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးစက်ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ လုပ်ရပ်လေးကို သာဓုခေါ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ထီးျပင္၊ ထီးေရာင္းကာ ဝမ္းေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲေျဖရွင္းေနတဲ့ အဘိုးကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက္
ပရိသတ္ႀကီးေရ မိုးစက္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာလည္း သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ဝမ္းေရးကို ခက္ခဲစြာေျဖရွင္းေနတဲ့ အဘိုးတစ္ေယာက္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္။ အဘိုးရွိတဲ့ေနရာကို မိုးစက္ကသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဘိုးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုေလးစားဂုဏ္ျပဳတာေၾကာင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ျဖစ္ခဲ့ပုံကိုလည္း အခုလိုပဲမွ်ေဝထားခဲ့ပါတယ္။
““အဘ ထီးျပင္တာလား…??” “ဟမ္…” “ထီးျပင္တာလား ထီးေရာင္းတာလားလို႔…” “ကြၽန္ေတာ္နားသိပ္မၾကားရဘူးဗ် …” “ထီးေရာ ေရာင္းလားလို႔…” (အနားကပ္ၿပီး ေမးလိုက္ခါမွ..) “ေရာင္းပါတယ္ ၂၀၀၀ ပါ …” “ဟုတ္ကဲ့ …” ဒီလိုနဲ႔ အဘကို အနားနားကပ္ၿပီး ေသခ်ာေမးၾကည့္တဲ့ ေမးခြန္းေတြအရ… သားသမီး (၄)ေယာက္နဲ႔ အိမ္ငွါးေနကာ ဘဝကို ခက္ခဲစြာျဖတ္သန္းေနကာ ျဖတ္သန္းေနရေၾကာင္း သိရ၍… “အဘ ၂၀၀၀ ေနာ္ … ေရာ့ တစ္သိန္းယူသြားေနာ္..” “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ…’” အဘရဲ႕ နားမၾကားတဲ့ ေဝဒနာအျပင္ အိမ္ကပ္ထဲက အေႂကြေလးေတြနဲ႔ ဒီေန႔ အတြက္ ထီးျပင္နဲ႔ ထီးေရာင္း တြက္ေခ်မကိုက္ေသးေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရတာဟာ တကယ္ကို စိတ္မေကာင္းစရာပါ ။
အဘရဲ႕ ခက္ခဲေနတဲ့ ဘဝအေျခအေနေတြ အျမန္ဆုံး အဆင္ေျပပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း … ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ ပါဝင္လႉဒါန္းၾကသူမ်ား ေက်းဇူးအထူးတင္လ်က္ပါခင္ဗ်ာ။”ဆိုျပီးေဖာ္ျပထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ မိုးစက္ရဲ႕ မြန္ျမတ္လွတဲ့ လုပ္ရပ္ေလးကို သာဓုေခၚေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ” ဖခင်ကြီးအပါအဝင် သူမ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာတွေကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိတာကြောင့် တနေ့တော့ပြန်ဆုံချင်သေးကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဖွေးဖွေး”
Next post ” သူငယ်ချင်းနှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်ဆီက အကြိုမွေးနေ့surprise​လက်ဆောင်အဖြစ် ရွှေလက်စွပ်လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အင်ကြင်း ”